सिन्धुपाल्चोकमा विश्वको ध्यान : जीवित महाकाली उत्पती, २१ जनामा सवार [ भिडियोसहित ] - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » सिन्धुपाल्चोकमा विश्वको ध्यान : जीवित महाकाली उत्पती, २१ जनामा सवार [ भिडियोसहित ]
काठमाडौ । अहिले विश्वभरीका हिन्दुहरुको ध्यान नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ तर्फ छ । यहाँ विश्वभरीकै हिन्दुहरुले विशेष मान्ने माता महाकालीको जीवित अवशेष फेला परेको दावी गरिएको छ । महाकालीको पैताला यहाँ भेटिएको र उत्खनन गर्दा साक्षत मुर्तीपनि फेला परेको दावी गरिएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने माता महाकाली जीवित आत्मामा प्रवेश गरेर सिन्धु कालीको रुपमा माता महाकाली उक्त स्थानमा रहेको वाणी आएको थियो ।
दुई सय बर्षभन्दा पुरानो तर कहिलेको भन्ने एकिन नभएपनि लिच्छवी कालपूर्व कै पौराणिक नारायण मन्दिर रहेको दावी पुरातत्व विभागको रहेको छ । त्यही मन्दिर परिसरमा साक्षत महाकालीको उत्पती भएको छ । बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला । Click Watch Video